SomaliaReport: Bulshada Degaanka la Dagaalay Burcada Afduubtay
By MOHAMED ODOWA 11/02/2011
Afduubayaashii haystay labada shaqaalaha samafalka ee Kooxda Miina-gurida Deenishka (DDG) iyo dadka degaanka ayaa isku weeraray isgoyska u dhexeeya degmooyinka Xiinlabi iyo Camara ee Gobolka Mudug 4:00pm ee waqtiga degaanka.
Waxaa lasoo baahiyey in shan qof ku dhinteen oo ay ku jiraan saddex burcad dagaalkaas. Labo kalena way ku dhaawacmeen iska horimaadka, oo uu ka mid yahay Maxamed Gafaajo oo ah hoggaamiyaha burcadda afduubtay labada shaqaalaha samafalka, sida laga soo xigtay dadka degan Xiinlabe.
Burcad wadatay gawaari ah Toyota Serf iyo hub, ayaa la sheegay inay iyagu bilaabeen dagaalka kadib markii ay ogaadeen in weerarka dadka degaanka ay taakulaynayaan ciidamo taageersan Maamulka Ximin iyo Xeeb.
“Kooxda burcadda oo wadata la afduubayaasha ayaa ka baxay degmada Bacaadweyn kuna socday degaanka Xiinlabe iyo Camara. Waa inaan la degaallanaa maadaama burcaddaani ay sumcadxumo u keeneen gobolkayaga,” oday reer Xiinlabi oo codsaday in magacaabo Xaaji Muumin ayaa ku yiri Somalia Report.
Madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb, Maxamed Aaden Tii’ay, aya u sheegay Somalia Report inay cayrsanayaan burcadda.
“Burcadu ma haystaan meelay u baxsadaan. Gacmahayaga kama baxayaan. Waxaa na taageersan dadka degaanka. Wxaan xiraynaa xudduuda u dhaxaysa Gal-Mudug iyo Ximin iyo Xeeb si aan uga hortagno dhaqdhaqaaqa burcada.”
Degnada Bacaadweyn waxay ka tirsan tahay aaga gobolka Mudug oo ay ka taliso dowladda Gal-Mudug meesha Xiinlabe iyo Camara ay hoos yimaadaan maamulka Ximin iyo Xeeb.
2. La Tuhmayaashii Afduubka oo Baxsaday Tani waxay soo baxday kadib markii labo nin oo lagu xiray koonfurta Gaalkacyo oo lug ku lahaa afduubka ay ka baxsadeen xabsiga habeenkii Isniinta kadib markii nin burcad ahi uu laaluushay illaalada xabsiga.
Axmed Maxamed Maxamud, wasiir ku xigeenka nabadgalyada gudaha ee dowladda Gal-Mudug, ayaa Somalia Report u sheegay in la tuhmayaasha, Cabdirisaaq Macallin Dheere iyo Bacadle Sheekh Xuseen, ay baxsadeen markii heshiis dhexmaray burcada iyo illalada xabsiga.
“Burcada haysata la afduubayaasha ajnabiga ah ayaa marlabaad ku lugleh falkan foosha xun,” ayuu yiri. “Waxaan u dhaleecaynaynaa said ugu adag waxaana ku dadaalaynaa sidii aan ugu guulaysan lahayn soo deynta la haystayaasha.”
Mudane Maxamuud ayaa sheegay in gal-Mudug ay qorsheenaysay inay labada nin ku xukunto saameynta ay ku lehayeen afduubka.
Cabdirisaaq wuxuu ahaa madaxa kooxda u xilsaaran illalinta wadaniga Mareykanka Jessie Buchanan, 32 iyo la shaqeeyaheeda Poul Hagen Thisted, 60. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu Somalia report u sheegay inuu la shaqeeyey hubeynayaasha qabsaday shaqaalaha samafalka eek u wareejiyey burcada.
In ay labada baxsade ay lu ku lahaayeen arrinta maanta dhacday iyo inkale lama hibo.